Saacado ayaa ka harsan Go’aanka ICJ ee berrito – Yuusuf Garaad Cumar – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Saacado ayaa ka harsan Go’aanka ICJ ee berrito – Yuusuf Garaad Cumar
Muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waa mid aad u muhiim ah. Waxay labada dal isku haystaan bad uu bedkeedu yahay 142,000 km oo laba jibbaaran. Waa bed ka baaxad weyn dhulka Somaliland oo dhan.
Waxaana la rumeysan yahay aagga badweynta India ee ay Soomaaliya iyo Kenya ay lahaashaheeda ku muransan yihiin in uu ku jiro kheyraad badan oo dabiici ah oo uu ka mid yahay shidaal.
Berri ayay magaalada Hague, Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladdu (ICJ) ku dhawaaqi doontaa go’aanka ay ka gaartay diidmada hordhaca ah ee Kenya ee ku saabsan dacwadda Soomaaliya ay ku dalbeyso in la cayimo soohdinta badeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Kenya waxaa ay cuskatay is afgarad ay la gaartay Soomaaliya 2009 oo waxyaabaha ku qoran ay ka mid tahay in ay labada dal ka wadahadlaan wixii khilaaf ah ee ka jira soohdinta badda.
Soomaaliya waxaa ay ku doodday in ay labada dowladood ay ka wadahadleen khilaafkan, ayna ku fashilmeen in ay xal ka gaaraan soohdinta.
Maxkamadda ICJ waxay bishii September 2016 dhegeysatay doodaha Qareennada Caalamiga ah ee matalaya labada Dowladood.
Berri galab saacaddu marka ay tahay 5-ta Galabnimo wakhtiga Soomaaliya ayaa Guddoomiyaha Maxkamadda ICJ, Ronny Abraham, uu ku dhawaaqi doonaa go’aanka Maxkamadda.
Markaasna la galo dhegeysiga dacwadda, taas oo wakhti dheer qaadan doonta.
Sida ay Kenya dalbeyso, haddii ay Maxkamaddu go’aan ku gaarto in aanay dacwaddan furi doonin, waxay noqoneysaa in Soomaaliya ay dacwaddeeda dib ula soo noqoto oo markaas ay wadahadal la furto Kenya.
Berrito waxaa goob joog ka ahaan doona Hague, wafdi Soomaaliya ah oo uu hoggaaminayo Xeer Ialaaliyaha Axmed Cali Daahir, Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Brussels, Dr. Cali Faqi oo isagu ah wakiilka Soomaaliya ee dacwadda ayna wehliyaan Danjirayaal dhowr ah iyo Muna Sharmaan oo ah Qareen Soomaaliyeed oo dacwaddan billowgeedii ilaa iyo hadda gacanta ku haysa sumcadna uga kasbatay Soomaali badan.
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ):
ICJ waa mid ka mid ah Hey’adaha Qarammada Midoobay. 1945 ayaa la unkay. Waxaa ay ku saleysan tahay Axdiga Qarammada Midoobay. Xarunteedu waa Hague, dalka Netherlands. Waxaa ay ka kooban tahay 15 Garsoore oo midkiiba 9 sano ay xilka u doortaan Golaha Guud ee Qarammada Midoobay oo ay xubno ka yihiin 193 dal iyo Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay oo ay xubno ka yihiin 15 dal. Garsoore kastaa waa in uu helaa aqlabiyadda codadka labada Gole si uu xilka u qabto ama uu u sii hayo.
Markaa Garsoore kasta oo ka tirsan ICJ wuxuu u baahan yahay codadka Dowladaha xubnaha ka ah Qarammada Midoobay.
Hadda waxaa Guddoomiye u ah Ronny Abraham oo dhalashadiisu ay tahay Faransiis kuna dhashay magaalada Alaxendria ee dalka Masar. Guddoomiye ku Xigeenka ICJ waa Cabdiqawi Yusuf oo ah Soomaali.
W/Q:- Yuusuf Garaad Cumar